Muxuu yahay Hiddo Dhaqanka Qarsoon iyo Midka Muuqda (Visible and invisible culture) -News and information about Somalia
Home Warkii Muxuu yahay Hiddo Dhaqanka Qarsoon iyo Midka Muuqda (Visible and invisible culture)
Muxuu yahay Hiddo Dhaqanka Qarsoon iyo Midka Muuqda (Visible and invisible culture)
Shalay ayay ahayd markii Baarlamaanka Soomaaliyeed la horgeeyay heshiish Caalami ah oo lagu magacaabo Hiddo-dhaqameedka Muuqda iyo midka qarsoon taasoo Soomaali badan ay fahmi waayeen.
Marka hore Hiddo dhaqameedka Muuqda (Visible culture) waa midka la wada yaqaano oo ku saabsan Habdhaqanka waxaana ka mid ah hiddaha ummad kasta gaar u ah sida Luuqadda, Suugaanta, Cuntada, Qaab labiska, qaabka salaanta IWM.
Balse Hiddo dhaqameedka aan muuqan (Invisible culture) waxa uu la xiriiraa Qiyimka, Habfekerka, Dareenka iyo Rumaynta, waxaana ka mid ah ;
1) Rumaynta Diimaha iyo Aragtiyada Aduunka ka jira,
2) Shuruucda xiriirka nuucyadiisa kala duwan (xiriirka caadiga ah iyo midka galamada ee lab iyo dhedig, ama lab iyo lab ama dhedig iyo dhedig)
3) u dulqaadashada isbedelada qofka ku dhacaya ama dadka kale sida mid jireed iyo mid Caqiido.
4) Qaab fekerka qofka ee Diintiisa siday doonto ha ahaatee, Tusaale ahaan in qof xaq u leeyahay in uu ka fekero sida Abuurka Jinka iyo Malaaigta ay yihiin lab iyo dhedig.
5) ku raaxaysiga Halisaha sida wajihida howl culculus oo noqon kara arimo aadan waligaa maqal ama arag
6) kala duwanaanshaha Jinsiga guud ahaan oo reer Galbeedka ku sheegaan (LGBTQ) oo laga soo gaabiyay lesbian khaniisad, Gay Khaniis, Bisexual qof nin iyo naag isku ah, transgender qof ka guuray Jinsiga uu ahaa sida Nin oo Naag iska dhigay, iyo Queer qof wareersan oo wali aan go’aan ka gaarin waxa uu noqon lahaa. iyo arimo kale oo badan.
Heshiishkan ama Baaqaan oo ah mid caalami ah oo UNESCO ka soo baxay ayaa waxaa Ogolaaday ama saxiixay dowlado badan halka qaarna ay iska diideen gaar ahaan dowladaha Muslimka maadaamaa Hido-dhaqanka qarsoon ay ku jiraan arimo badan oo ka hor imaanaya Diinta Islaamka.
Baaqaan waxaa xuquuqdooda lagu ilaalayaa Dadyowga dalalka Diimaha badan ka jira iyo waliba Dalalka Fasahaadka jinsiga uu ka jiro, balse Soomaaliya oo kale waxaan filaa in uusan anfacaynin islamarkaasina aysan u baahnayn.
Hadaba, Xubnaha Baarlamaanka Soomaaliyeed ayaan rajaynayaa in ay si fiicanu aqriyaan islamarkaasina ay Fahmaan waxyaabaha ku hoos duugan, ayna hubiyaan inta aan la ansixin.
Waxaan ku kalsoonahay in Xildhibaanada Qaar ee ku jira baarlamaanka DF in Aqoontooda ay gaarsiisan tahay fahamka waxa aan ku haboonayn Diinteena iyo Dhaqankeena Suuban.
Previous articleDEG DEG: Banaanbax Looga Soo Horjeedo Dilkii Saciid Adoon Oo Ka Socda Kismaayo
Next articleMaxkamadda Sare oo ka hadashay dacwadii Hilimo Qaran ee xukuumadda
Wararkii Ugu Dambeeyay Caleemo saarka Axmed Madoobe iyo Xaalka Kismaayo
Al-Shabaab Oo La Wareegay Deegaan Kale Oo Ku Yaalla Gobolka Hiiraan